Akụkọ - National Holidays na June
June 1: Germany-Pentikọst
A makwaara dị ka Mụọ Nsọ Mọnde ma ọ bụ Pentikọst, ọ na-echeta ụbọchị nke iri ise mgbe a kpọlitesịrị Jizọs n’ọnwụ wee zipụ Mmụọ Nsọ n’ụwa ka ndị na-eso ụzọ ya nwee ike zisa ozi ọma N'ụbọchị a, Germany ga-enwe ụdị mmemme dị iche iche dị iche iche, fee ofufe n'èzí, ma ọ bụ banye n'okike iji nabata ọbịbịa nke oge ọkọchị.
June 2: Italybọchị Italy-Republic
Republicbọchị Republictali Republic bụ ụbọchị mba Italy iji cheta mkpochapụ nke ọchịchị eze Italy na nguzobe nke Republic n'ụdị nke referendum site na June 2 ruo 3, 1946.
June 6: Sweden-Swedenbọchị Mba
Ka ọnwa Juunu dị na mkpụrụ ụbọchị isii n’afọ 1809, Sweden wepụtara iwu izizi nke mbụ. Na 1983, ndị omeiwu kwupụtara na June 6 bụ ụbọchị mba nke Sweden.
June 10: Portugal-Portugal ụbọchị
Bọchị a bụ ụbọchị ọnwụ nke ndị German hụrụ mba n'anya Jamies. Na 1977, gọọmentị Portuguese kpọrọ ụbọchị a "Portuguesebọchị Portuguese, ụbọchị Cameze na ụbọchị ndị Portuguese na-asụ Ọwụwa na Portuguese" iji kpokọta ndị isi ike nke ndị Portuguese na-asụ Chinese agbasasị gbasasịa n'akụkụ ụwa niile.
June 12: Russia-Daybọchị Mba
Na June 12, 1990, Soviet Soviet Kasị Elu nakweere ma kwupụta Nkwupụta nke ọbụbụeze, na-ekwupụta nnwere onwe Russia na Soviet Union. Ndị Russia họpụtara ụbọchị a dịka ezumike mba.
June 12: Naịjirịa-ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya
Na Naịjirịa bụ “ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya” bụ mgbe ọnwa Mee dị 29. Iji mee ncheta onyinye nke Moshod Abiola na Babagana Jinkibai nyere na usoro ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa, e degharịrị ya rue ụbọchị iri na abụọ nke ọnwa Juun site na nkwenye nke ndị Sineti na Houselọ Ndị Nnọchiteanya. .
June 12: Philippines-encebọchị nnwere onwe
N’afọ 1898, ndị Filipino bidoro nnukwu ọgbaghara mba megide ọchịchị ndị Spain wee maa ọkwa nhiwe Republic nke mbụ n’akụkọ ihe mere eme na Philippines na June 12 nke afọ ahụ.
June 12: ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ nke Britain-Queen Elizabeth II
Birthdaybọchị ọmụmụ nke Queen Elizabeth nke United Kingdom na-ezo aka ụbọchị ọmụmụ nke Queen Elizabeth II nke United Kingdom, nke bụ Satọde nke abụọ nke ọnwa Juun n'afọ ọ bụla.
Na ọchịchị nke United Kingdom, dị ka usoro akụkọ ihe mere eme si dị, ụbọchị ọmụmụ nke Eze bụ ụbọchị mba Britain, ụbọchị ọmụmụ nke Elizabet nke Abụọ bụ Eprel 21. Ugbu a, n'ihi ajọ ihu igwe na London na Eprel, Satọde nke abụọ nke E debere June kwa afọ. Ọ bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ nke ụbọchị eze nwanyị.
June 21: Obodo Nordic-Midsummer
Ememe Ọchịchị Midsummer bụ ememme dị mkpa dị mkpa maka ndị bi n'ebe ugwu Europe. Emume a na-eme ya kwa afọ n’abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Juun. Mgbe Northern Europe ghọrọ onye Katọlik, e hiwere mgbakwunye a iji cheta ụbọchị ọmụmụ nke Christian John the Baptist (June 24). Ka oge na-aga, ụcha okpukpe ya jiri nke nta nke nta pụọ ​​ma ghọọ ememme ndị mmadụ.
June 24: Ememe Peru nke Sun
Ememme Sun na June 24 bụ ememme kachasị mkpa nke ndị India Peruvian na ndị Quechua. A na-eme ememme ahụ na Sacsavaman Castle na mkpọmkpọ ebe Inca dị nso na mpụga Cuzco. A na-eme ememme ahụ maka chi anyanwụ, a makwaara dị ka ememme anyanwụ.
E nwere isi ofufe anyanwụ isii na ebe ọmụmụ ọdịbendị anyanwụ na ụwa, China oge ochie, India oge ochie, Ijipt oge ochie, Gris oge ochie na alaeze Inca oge ochie nke South America. Enwere ọtụtụ mba na-anabata Ememme Anyanwụ, ma nke kachasị ama bụ Ememme Sun na Peru.
June 27: Djibouti-Nnwere Onwe
Tupu ndị colon abịa wakpo, Djibouti bụ ndị eze atọ nke Hausa, Tajura na Obok. Djibouti kwupụtara nnwere onwe na June 27, 1977, a na-akpọ mba ahụ Republic of Djibouti.